Xubnaha Baarlamaanka Puntland oo Maanta Doortay Guddoomiye Cusub | All Bajuni
Xubnaha Baarlamaanka Puntland oo Maanta Doortay Guddoomiye Cusub
Baarlamaanka Puntland oo maalmahan diyaar-garow xooggan ugu jiray doorashada gudoomiyahooda cusub ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe ku doortay Axmed Cali Xaashi oo noqon doona gudoomiyaha cusub ee barlamaanka maaamulka Puntland.
Waxaa xilka kula loolamay xildhibaan C/xakiin Dhoobo-Dareed, waxaana guddoomiyaha la doortay uu helay codad dhan 41- oo kamid ah codadka mudanayaasha baarlamaanka PL halka musharaxa isna la tartamayay uu helay codad dhan 22 cod.
Gudoomiyaha cusub oo hadal kooban jeediyay doorashada ka dib ayaa u mahad-celiyay xildhibaanada codadkooda siiyay ,waxaana uu sheegay in uu shaqadiisa si hufan u gudan doono ,isaga oo balan-qaaday in uu ka shaqayn doono horumarinta arimaha barlamaanka.
“Waan la socdaa mas’uuliyad weyn ayaan qaaday ,waxaana rajaynayaa in aan uga soo baxo sida ay tahay waana u mahad-celinayaa cid walba oo doorashadayda ku faraxday “ ayuu yiri gudoomiyaha cusub oo ka hadlayay doorashadiisa.
“Musharaxa ila tartamayay waxaan u rajaynayaa guuul doorashooyinka danbe ,waxaana horyaal howlo badan oo u baahan in wax laga qabto “ ayuu mar kale yiri Axmed Xaashi oo tilmaamay in doorashadan u ahayd isaga mid taariikhi ah.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha cusub ayaa horey u soo noqday hogaanka barlamaanka Puntland intii u dhaxaysay 2005-tii ilaa 2009-kii ,waana markii labaad oo uu xilkan ku guulaysato ,iyadoo xildhibaanno warbaahinta la hadlay ay sheegeen in in mas’uulkan cusub uu howshan khibrad u leeyahay